भगवान यस्तो कसैलाई नहोस् : पिसाब थैलीमा १२० सि.एम को बिजुलीको तारा पसेपछि [भिडियो] - Ramechhap Online
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भगवान यस्तो कसैलाई नहोस् : पिसाब थैलीमा १२० सि.एम को बिजुलीको तारा पसेपछि [भिडियो]
यसपछि डाक्टरले बिरामीको परिवारलाई जानकारी गरायो । यो सुनेर बिरामी फुयालका परिवार अक्क न बक्क परे । यसपछि फुयाल परिवारले डाक्टरको सल्लाह अनुसार तत्काल अप्रेशन गर्न तयार गरे । भगवानको कृपा र डा. दिवाकर विश्वासको टिमको मेहनतले बिरामी फुयालको अप्रेशन सफल भयो । डाक्टरले उनको पिसाब थैलीबाट एक मिटर २० सेन्टिमिटरको लामो बिजुलीको लगभग तिन बाईसको तारा निकालेर सफल अप्रेशन गरे । अहिले बिरामी फुयाल सामान्य छन । तर उनको पिसाब थैलीमा यत्ति लामो तार कसरी पुग्यो उनको परिवार अच्चममा परेको छ । भिडियो
मुटु स्वस्थ राख्ने ८ तरिका यस्ता हुन्
ज्योतिषलाई विश्वास गर्नुहुन्छ ? गर्नुहुन्छ भने यि राशि भएका जोडि कहिल्यै टुट्दैनन् //
कार्यक्रमका लागि जापान पुगेका फुलन्देकी आमा र सबिना गुरुङलाई विमानस्थलबाटै फर्काइयो आखिर किन फर्कैयो त??????